Maxaa Laga Filayey Isimada SSC Inay Ka soo Saaraan Shirkii Buurawadal? – Radio Daljir
Maxaa Laga Filayey Isimada SSC Inay Ka soo Saaraan Shirkii Buurawadal?
Febraayo 13, 2010 12:00 b 0
Buurawadal, Feb 14 – Maxaa Laga Filayey Isimada SSC Inay Ka soo Saaraan Shirkii Buurawadal?
1. Isimada waxaa laga filayey inay soo doortaan guddi u xilsaaran agaasinka hawlaha bulshada SSC kaga qaybgelayso soo celinta deegaanada maqan iyo midnimada beesha.
2. Waxaa laga filayey inay jaangooyaan waxqabadka looga baahan yahay bulshada SSC ee ay kaga qaybgelayso xoraynta iyo midnimada. Hawlahaasna waxaa ugu mug weyn isu keenidda ciidan la soo xulay iyo dhaqaale loogu talogalay.
3. Waxaa laga filayey inay beel ahaan qaybsadaan hawsha oo beel kasta muddo kooban ku soo diyaariso ciidan iyo dhaqaalihii loogu talogalay.
4. Waxaa laga filayey inay jaalliyadda SSC ee dibadda siiyaan dawrka xidhiidhka dibadda iyo wacyigelinta adduunka.
5. Waxaa laga filayey inay qaadaa dhigaan qaabkii ay bulshada SSC ee dhinaca Somaliland wadahadal iyo is-afgarad loola bilaabi lahaa.
6. Waxaa laga filayey in intaas ka dib ay xisaab ula soo noqdaan maamulka Puntland iyo sidii loo wada dhisi lahaa ciidan habaysan iyo dhaqaale ku filan.
7. Waxaa laga filayey inay maamulka Puntland kala hadlaan qaabkii looga dhigi lahaa degmooyinka SSC ee gacantooda ku jira kuwo tayo leh oo daboola baahida bulshooyinkooda.
8. Waxaa laga filayey inay wanaagga, Islaamnimada, Soomaalinimada iyaga oo eegaya ay qaataan tanaasul oo isimada beelaha Isaaqa la furaan dood iyo wadaxaajood ku wajahan sidii loo baajin lahaa dagaal sokeeye, nabadna loogu wada noolaan lahaa. Sidaas waxaan u leeyahay aniga oo eegaya waxa dadka ka dhaxeeya iyo in waqtigan xaadirka ah aan lagu xambaari karin beelaha Soomaaliyeed ee tamarta daran khaladaadka ay geystaan maamulada ka jira deegaamadooda. Waa suurtagal wayna u badan tahay in la is afgarto.
Dhammaan qodobada siddeeda ah iyo kuwo kaleba oo aniga iga maqan waa kuwo ka soo maaxa maskax iyo xoog wadajira, weligeedna ma hantaan kuwa wax kala jiidanayaa. La soco qoraalada dambe.
Axmed M Xassan
Faallo: Shirkii Buurowadal ee Isimada Sool, Sanaag & Cayn.
Buurowadal, Feb 13 – Isimadu laba garab ayay ahaayeen. Garab maamulka Puntland aaminsanaa in lala sii shaqeeyo, iyo garab aaminsanaa in hogaankii Nairobi lagu soo dhisay uu qabto hogaanka ummadda SSC.
Waa laba fikradood oo kala duwan oo aan isu iman karin. Waa in miduun la qaataa. Waxaa ku soo baxay shirkii oo guulaystay kooxda aaminsan in hogaanku talada SSC gacanta ku qabto.
Midbaase Kooxda guulaysatay ka maqan. Waxaa ka maqan in guushooda qaabkan ahi ay tahay dagaal. Hore haddii kooxda qaar ka mid ah loo diiday inay dalka soo galaan iyo haddii warbaahinta la iska tuuryo tuuryeeyey, waxay ahayd wax fudud.
Maamulka Puntland guud ahaan, gaar ahaan kooxda SSC ugu jirta dawladda oo uu hogaaminayo Cabdisamad Cali Shire waxay qabaan inay tartan u soo galeen maamulka Puntland, kagana guulaysteen kooxo badan oo kooxda Buurawadal ku guulaysatay ka mid tahay. Wixii khaldan waa la garan karaa ha la saxo, maamul baanu idinku dul dhisaynaase waa aynu dagaalano.
Gebogebadii wax badan oo maamulka Puntland ka khaldan guud ahaan way jiraan, wax badan oo ka khaldan madaxda SSC ee Puntland ku jirtana way jiraan, wax badan oo shacabka SSC ka khaldanina way jiraan, waxaase khaladka ugu weyn ah in Isimadii laga filayey inay xal keenaan ay maanta soo cimaamadaan dagaal hor leh oo bulshada SSC iskaga soo horjeesato iyaga oo xooggoodii iyo dhaqaalahoodiiba ku burburinaya.
Aniga oo isku dayaya in aan seegin hadafka qoraalkayga ayaan intaas ku soo koobayaa. Nuxurka qoraalkanina waxa weeye in bogga waayo-aragnimada lagu darsado shirkii Buurowadal, la ogaadana in xaaladdeena iyo korriinka caqligeenu mar walba wada socdaan.
Maamaulka cusub ee degmada Xarfo & Midkii hore oo maanta xilalkii la kala wareegay, mas?uuliyiin badanna ay ka qaybgaleen.